२३ वर्षकी चितवनकी सुजिता दिन दहाडै अपहरणमा परिन् – OSNepal
Online Samachar Nepal
२३ वर्षकी चितवनकी सुजिता दिन दहाडै अपहरणमा परिन्
काठमाडौ । सामान्य घर परिवारकी सुजिता भण्डारी हराएको धेरै दिन भइसक्यो । उनी सम्पर्क विहिन भएकी छन् । उनले मलाई गाडीमा राख्दैछन् भनेर बहिनीलाई अन्तिम पटक फोन गरेकी थिइन् । चितवन राप्ती नगरपालिका वडा नं ३ को प्रगतीपुरमा बस्ने २३ वर्षकी सुजिता भण्डारी ब्याचलर चौथो बर्षको परिक्षा दिएर घरमा बसेकी थिइन् । काठमाडौमा दिदीसंग पढ्न बसेकी उनी लकडाउन भएपछि चितवन घर पुगेकी हुन् । उनी सिमरा चोकवाट म अ पह रणमा परें भनेर दिदीलाई फोन गरेकी थिइन् ।
तर त्यसपछि उनलाई कसले किन लग्यो भन्ने खुलेको छैन । कसैले अप हर ण गरेको हो भनेपनि पैसा माग्न फोन आउनुपर्ने त्यसरी कसैले पनि फोन गरेको छैन। उनी खैरो रंगको लुगा लगाएर घरवाट बाहिर निस्किेकी थिइन् । तर उनले आफु सिमरा चोकमा पुगेको र कसैले गाडीमा मलाई हाल्दैछ भनेर दिदीलाई फोन गरेकी थिइन् । सुजिता घरवाट वाहिर जाँदा साथीकोमा जान्छु भनेकी थिइन् ।
दिदी मलाई गाडीमा आएका मान्छेहरुले सौराहा जाने बाटो कता हो भनेर सोधेका थिए । गाडीमा एक जना केटा र एक जना केटी छन् । उनीहरुले मलाई आँखामा पट्टी बाँधेर गाडीमा राखेका छन् भनेको दिदीले बताइन् । उनले ९ वजे धेरै पटक फोन गरेकी रहिछन् । ६ पटक फोन गर्दा नउठेपछि दिदी आफैले कल ब्याक गरेकी थिइन् । दिदीले फोन गर्दा १२ वजेको थियो । दिदीले फोन गर्दा उनले आफु सौराहा चोकमा कसैको गाडीमा रहेको र उनीहरुले आफुलाई आँखामा कालो पट्टी बाँधेको बताएकी थिइन् । त्यस यता उनी सम्पर्क विहिन भएकी छन् ।
By suman SAPKOTA
View all of suman SAPKOTA's posts.
Next: ओलीको टर्रो अभिव्यक्ति : नेपाललेखि न्यायालयसम्म निशानामा
Next: नेपालकै यि स्थानिय तह जहा एक जना पनि छैनन् संक्रमित, यसरी भयो सम्भब !
एयरपोर्टमा अभिनेत्री श्रद्धा कपुरले गरेको यस्तो बानिले फ्यान भए चकित
बाँकेमा तिब्र गतिको ट्रकले मोटरसाइकललाई ठक्कर दियो
भिरबाट लडेर घाइते भएकी बालिकाको पाँच दिनपछि हेलिकप्टरमार्फत उद्धार
यस वर्षको मनसुन ढिलो सुरु हुने